ထူးအိမ်သင် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ထူးအိမ်သင်
Category Archives: ထူးအိမ်သင်
၁။ ရွှေဘုံစံ – ရင်ဂို ၂။ အချစ်ဆိုသည်မှာ – ထူးအိမ်သင် ၃။ နွေသာဆိုရင်မှာပြာ – ဘိုဖြူ ၄။ ငယ်ချစ်အတွက် တေးတစ်ပုဒ် – ဂရေဟမ် ၅။ အချစ်ဆုံးမဟုတ်တဲ့ အချစ်ဆုံး – ကဗျာဘွဲ့ မှူး ၆။ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ပြန်လာမယ် – အောင်ရင် ၇။ ရည်းစားဦးဇာတ်လမ်း – ဂရေဟမ် ၈။ ငယ်ချစ်ဦး – ရင်ဂို ၉။ ငယ်သူမို့ – ကဗျာဘွဲ့ မှူး ၁၀။ သူသိရင်ပြီးရောပေ့ါ – အောင်ရင် ၁၁။ ကျေပါတယ် – မီမီဝင်းဖေ ၁၂။ စံပယ်ပွင့်လေး – ဘိုဖြူ သီချင်းဒေါင်းရန် Download … Continue Reading →
March 11, 2011 htoo htoo ဘိုဖြူ ထူးအိမ်သင် ဂရေဟမ် ရင်ဂို အောင်ရင် ကဗျာဘွဲ့မှုး မီမီဝင်းဖေ Media Myanmar Artist 1 Comment
ဝေးသွားတဲ့အခါ – ထူးအိမ်သင် Ft- ပေါက်ပေါက် :D
ကျွန်တော်နားထောင်ဖူးတဲ့ Version ထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ် . . . တေးဆိုငှက်နဲ့ ဝေးသွားတဲ့အခါ . . . << Download Mediafire
February 3, 2011 HkunSeng Maran ထူးအိမ်သင် Media ထူးအိမ်သင် ပေါက်ပေါက် 10 Comments
ငြိမ်းချမ်းပါစေ (ထူးအိမ်သင် ၊ အောင်ရင် ၊ ဘိုဘို ၊ ညီပုလေး ၊ ဖိုးဖန်)
၁။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ (ထူးအိမ်သင် ၊ အောင်ရင် ၊ ဘိုဘို ၊ ညီပုလေး ၊ ဖိုးဖန်) ၂။ ချိုပေါ့ကျ (ထူးအိမ်သင်၊ ဖိုးဖန်) ၃။ ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ (ထူးအိမ်သင် ၊ အောင်ရင် ၊ ဘိုဘို ၊ ညီပုလေး ၊ ဖိုးဖန်) ၄။ ချစ်သူဝေး (ဘိုဘို၊ ညီပုလေး) ၅။ မျှော်လင့်တဲ့ည (အောင်ရင်၊ ထူးအိမ်သင်၊ ညီပုလေး) ၆။ နေရာချင်းသာလဲလိုက်ချင်တယ် ၇။ မျက်ကန်းချစ် (အောင်ရင်၊ ဖိုးဖန်) ၈။ မျှော်လင့်ရှင်သန် (အောင်ရင်၊ ညီပုလေး) ၉။ နွေဝတ်စုံ (အောင်ရင်၊ ဘိုဘို၊ ညီပုလေး) ၁၀။ မင်းကိုလွမ်းတဲ့ည (ဖိုးဖန်၊ ဘိုဘို)
October 2, 2010 swordfish ဘိုဘို ဖိုးဖန် ထူးအိမ်သင် အောင်ရင် ညီပုလေး5Comments
ထူးအိမ်သင် ရဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာ သီချင်းလေးပါ။ သီချင်းဒေါင်းရန်
September 15, 2010 htoo htoo အဆိုတော် (ကျား) ထူးအိမ်သင်3Comments
ထူးအိမ်သင်(ခ) ကိုငှက် အတွက် အမှတ်တရ သူ့ကဗျာလေးပါ
ဘာလိုလိုနဲ့ ၆ နှစ်ရှိ်သွားပြီလေ ထူးအိမ်သင်(ခ) ကိုငှက် အတွက် အမှတ်တရ သူ့ကဗျာလေးပါ … အမေ … မိန်းမတကာထက်၌ ကျနော်လေးစားမြတ်နိုးမဆုံးသော အနာဒိအနန္တမေတ္တာရှင် “ ချစ်သော မေမေ ” သို့ … အမေ ….. သားတော့ မီးလောင်နေပြီ … လူတွေကတော့ ရယ်မှာပဲ သားရင်ထဲမှာ ကဗျာ … ကဗျာ … ကဗျာ … သက်သာရာ ရမလားလို့ပါ (ဒီတစ်ခါတော့ဖြင့်) ၀မ်းရေစပ်ရင်လည်း နည်းနည်းခွင့်လွှတ်ပါအမေ သားတော့ မီးလောင်နေပြီ။ သျှပ်မှူးကျော်
August 14, 2010 salinthar ထူးအိမ်သင်3Comments
၁။ ကမ္ဘာငယ်သစ် – ထွဏ်းထွဏ်း ၂။ ဆုကျေးတွေမတူဘူး – ပိုးဒါလီသိန်းတန် ၃။ ၀ဋ်ကြွေးမဲ့သင်ခန်းစာ – စောဝင်းလွင် ၄။ ကောင်းကင်ကမ္ဘာ – ဆုန်သင်းပါရ် ၅။ ရင်ခွင်သစ်ဆီသို့ – ဇော်ဝင်းထွဋ် + ရင်ဂို ၆။ နောက်ဆုံးချိန်၌ – ထန်ကဒ်မှုံ + ရတနာဦး ၇။ သခင့်ရဲ့အလင်း – ထန်ကဒ်မှုံ + ထန်ဘွိုင်း + ကြီးယံ ၈။ တုံးလုံးမနေပါနဲ့ – ထန်ကဒ်မှုံ + ကဗျာဘွဲ့မှူး ၉။ အဖေ့ဆုတောင်း – ကိုဇမ်း ၁၀။ မယိုင်မလဲ – ထူးအိမ်သင် ၁၁။ အလိုတော်ပြည့်စုံစေသော် – ဟေမာနေ၀င်း ၁၂။ … Continue Reading →
August 11, 2010 MMA ဘရိတ်ကီ အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ထူးအိမ်သင် ထွဏ်းထွဏ်း ရင်ဂို ရတနာဦး ဆုန်သင်းပါရ် ပိုးဒါလီသိန်းတန် ဇော်ဝင်းထွဋ် ဟေမာနေ၀င်း ကဗျာဘွဲ့မှုး Myanmar Artist6Comments
htooaeinthinMya’s moon (ဂျူး ရဲ့ ၀တ္ထု့ လေး ပါ )
July 20, 2010 salinthar အဆိုတော် (ကျား) ထူးအိမ်သင် Myanmar Artist 1 Comment
မျက်ကန်းချစ် ထူးအိမ်သင် လမင်းငယ် နဲ့ အတူရထား တဲ့သီချင်းလေးပါ
July 18, 2010 salinthar အဆိုတော် (ကျား) ထူးအိမ်သင် Myanmar Artist6Comments
July 17, 2010 salinthar အဆိုတော် (ကျား) ထူးအိမ်သင် ထူးအိမ်သင်7Comments